YEYINTNGE(CANADA): Friday, September 05
Junta cheats students of prize money
Monday, 01 September 2008 17:12
The Burmese ruling junta's dependence on deceit knows no bounds. It has stooped to cheat even students. The regime had announced that it would awardaprize of 100,000 Kyat (US $ 84) for distinction marks for each subject in the tenth standard final examinations this year. It ended up awarding just 10,000 Kyat (US $ 8).
The junta invited the students at the end of August to attend the prize giving ceremony at the country's new capital, Naypyidaw. Earlier the Burmese government had announced over radio that it would give 100,000 Kyat for distinction marks (D) in each subject, saidastudent in Myitkyina.
No. 1 State High School in Myitkyina, the capital of Kachin State, northern Burma. It is one of the best schools in the township.
“I scored three D's in the examinations and government had announced that it would give 100,000 Kyat for each ‘D’ but I just received 10,000 Kyat for one D”, saidastudent who came back from the prize giving ceremony in Naypyidaw.
According toaparent, the prize was given to students of parents who are in government service in the Customs Department of the Ministry of Finance and Revenue,astudent added.
“There were nearly 45 students out of over 50 who attended the ceremony and all were daughters or the sons of government servants,” saidaparent who recently came from Naypyidaw.
She continued that almost all parents who came back from the ceremony were angry with the junta because they were cheated. The regime also cut transportation costs, and gave less than what was promised.'
"We received 60,000 Kyat (US $ 51) for our round trip from Myitkyina to Naypyidaw".
According toahigh school teacher, the students who received distinction marks in the examinations were also awarded by their school while other high schools have awarded small amount of money to students.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/05/20080အကြံပြုခြင်း
August 25, 2008 05:00
Guidy Mamann practices law in Toronto at Mamann & Associates and is certified by the Law Society of Upper Canada as an immigration specialist. Reach him confidentially at 416-862-0000 or metro@migrationlaw.com.
ရီပါပလစ်ကန် သမ္မတလောင်း ဂျွန်မက်ကိန်း (စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈)
ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်
ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းအား စက်တင်ဘာ (၁) ရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကို မတွေ့လိုသည့် ကိစ္စအပါအ၀င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းအား ခေတ်ပြိုင်သတင်းထောက် ပီတာအောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သည်။ နအဖ သတင်းစာတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းမှလွဲပြီး မည်သူ့ကိုမျှ မတွေ့လိုသေးကြောင်း ဦးကြည်ဝင်းအား ပြောသည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ယခုကဲ့သို့ စတင်ဖြေကြားသည်။
ဖြေ။ ။ ဒီလိုပါဗျာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်နဲ့ (၂) ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဖို့ရာ အာဏာပိုင်များ စီစဉ်ထားချက်။ အဲဒါက ကျနော့်ကိုမှာလိုက်တော့ ကျနော်က ဒေါ်စုကိုပြောပြတယ်လေ။ ဒီလိုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်လို့၊ အဲတော့ ကျနော်ပြန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့သဘောထား ပြန်ပြောပါဆိုတော့ သူက တော်တော်လေး မောနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ I am tired တဲ့ I needalittle rest ဆိုပြီးတော့ အဲလိုပြောတယ်ဗျ။ ပြောပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်ကိုတော့ ကျနော်မှတ်စုလေး ရေးထားတယ်။ မှတ်စုမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းဖတ်ပြမယ်နော်၊ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း နှင့် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောပါတဲ့။ အသိပေးပါတဲ့။ သို့သော် လက်ရှိ အခြေအနေဟာ ဆောင်ရွက်စရာတွေ မပြီးပြတ်ဘဲရှိနေတဲ့အတွက် တွေ့ဆုံရန်မဖြစ်နိုင်သေးလို့ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးစေ လိုကြောင်း အဲလိုပြောတယ်ဗျ။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ အဲဒီနေ့လည်း မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ မတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆရာ့ကို ဘယ်လိုပြောလိုက်တာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ဆရာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ မတွေ့နိုင်တာကလည်း အဲဒီဟာနဲ့ ဆက်နွယ်သွားတာပဲ။ မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးတာ လည်း ဆရာတင်မျိုးဝင်းက ဒီနေ့နေ့လယ်ဝင်မယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်နဲ့ နောက်နေ့ တွေ့မယ်ဆိုတော့ အဲဒီ (၂) ချက်ကို သတင်းတပ်ဖွဲ့က မှာကြားလိုက်တယ်။ မှာကြားတော့ အဲဒါ တွေပြောတော့ သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်က တပေါင်းတည်းလိုပါပဲ။
မေး။ ။ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ လစဉ် ပထမပတ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့ မူလက သဘောတူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ဆရာနဲ့ တရက်တည်း တွေ့ဖို့ဖြစ်လာရတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်နေရလို့လား၊ တခြားအကြောင်းကြောင့်လား ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်လည်းအဲလိုပဲနားလည်တယ်။ ကြာသပတေးတောင် ပထမကြာသပတေးပေါ့။ အဲဒါပေါ့ဗျ၊ ကျနော်လည်း သိပ်တော့မရှင်းဘူးဗျ။ အက်စ်ဘီကလည်း ကျနော့်ကို အဲဒီအချက်တော့မပြောဘူးဗျ။ ကျနော်လည်း အဲဒီအချက်တော့မမေးဖြစ်ဘူး။ သူက (၁) ရက်နေ့ ကောက် လုပ်လိုက်ရော နောက်ဆုံး စစ်တာက ဆရာတင်မျိုးဝင်းက သြဂုတ်လ (၁၇) ရက်နေ့ (၁) ရက်ဆိုတော့ (၁၄) ရက်ပဲ နှစ်ပတ်အတွင်း ပြန်စစ်တဲ့သဘောပေါ့။ နှစ်ပတ်အတွင်း မစစ်ရဘူးလို့လည်း မဆိုပါဘူး။ ကျနော် အဲဒီအပိုင်းတော့ အဲလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်။ ဒေါ်စုကတော့ တပေါင်းတည်း ဖြေလိုက်တယ်။ တော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်။ နားတော့နားချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
မေး။ ။ ကျနော်တို့နားလည်ထားတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် တောင်းဆို နေတယ်။ အဲဒီလို တောင်းဆိုနေတဲ့ ကာလမှာ ပြင်ပကအစားအသောက်လည်းမယူဘူး၊ ပြင်ပက ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်း မတွေ့ဆုံဘူးလို့ နားလည်ထားပါတယ်။ ဆရာသိထားတာကရော ဘယ်လိုပါလဲ။
ဖြေ။ ။ မူလရပိုင်ခွင့်တွေ အကုန်လုံးအဆင်မချောသေးဘူး ဆိုကြပါစို့လေ။ အဲလိုဖြစ်လို့လည်း ပါမယ် ထင်တယ်။ အဲလိုကြီးတော့ ကျနော်အတိအကျမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်လည်း ဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ မူလ ရပိုင်ခွင့်တွေကိစ္စကို အခုမနက်က စာတစောင်ပို့လိုက်ပြီး သတင်းတပ်ဖွဲ့ကို အခုဆက်ရေးနေတယ်၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ တောင်းဆိုညှိနှိုင်းဖို့ကလည်း ကျနော့်တာဝန်ဖြစ်နေတယ်။ သိပ်လည်းမများလှပါဘူး။ ကျနော်တို့လုပ်နေတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
မေး။ ။ ဆရာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ဆရာ့ကို အမှုအယူခံဝင်ဖို့ ကိစ္စကလွဲပြီး တခြား ကိစ္စတွေ မပြောရဘူးလို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောထားတယ်လို့ သတင်းတွေကြားရပါတယ် ဆရာ။ ဒါပေမယ့် ဆရာသွားတဲ့အခါမှာ ဦးအောင်ကြည်တို့ ဆရာတင်မျိုးဝင်းတို့နဲ့တွေ့ဖို့ ကိစ္စကို အာဏာပိုင်တွေက ကိုယ်တိုင် မသွားဘဲ ဆရာနဲ့ လူကြုံပါးပြီးပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဆရာ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲလိုတော့ ကျနော့်ကို မတားပါဘူး။ အဲလိုမရှိဘူး။ ကျနော့်ကို အဲလိုမမှာပါဘူး။ မပြောတတ်ဘူး။ ကျနော်သွားတဲ့နေ့နဲ့ ကြုံလို့နဲ့တူပါရဲ့ အဲဒါတော့မပြောတတ်ဘူး။
မေး။ ။ အာဏာပိုင်တွေက ဦးအောင်ကြည်နဲ့တွေ့ဖို့ကိစ္စ ဆရာနဲ့လူကြုံပါးတဲ့ကိစ္စ၊ ဂမ်ဘာရီနဲ့တွေ့ဖို့ကိစ္စ တုန်းကလည်း အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်တဲ့ကိစ္စကြောင့် မတွေ့တာလို့ ယူဆသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဆရာ့ အမြင်ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ မပြောတတ်ဘူးဗျာ အဲဒါတော့။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုက အဲလိုမပြောပါဘူး။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ပက အစားသောက်လက်မခံဘဲ နေတာကြာပြီဆိုတော့ ဆက်ပြီး ဒီအတိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သလဲခင်ဗျ။ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဆရာ့ကို ဘာများပြောလိုက်ပါသေးလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်စုလို့ ကျနော် အခုဒီကနေပြန်ပြီးတော့ ထွက်သွားလို့ရှိရင် အပြင်ကိုပြန်ရောက်သွားရင် လူတွေတော်တော်များများကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစာငတ်ခံနေတယ် ဆိုပြီး သတင်းဖြစ်တယ်။ ယူဆနေကြတယ်။ စိုးရိမ်နေကြတယ်။ ဒါကလည်း ဗမာပြည်တွင်းသာမကဘဲနဲ့ တော်တော်များများ တခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း အဲဒီစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော့်ကို ပထမဦးဆုံး မေးမယ့်မေးခွန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစာငတ်ခံတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။ ဘယ်လိုနေလဲလို့ မေးကြမယ်လို့။ အဲဒါဆိုရင် ကျနော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲလုိ့ အဲလိုမေးလိုက်တယ်။ မေးလိုက် တော့ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျနော့်ကို ပြောတာက အန်အယ်လ်ဒီလိုပြောပါတဲ့။ I am well ,but I am lost some weight တဲ့၊ ဘယ်လောက် weight ကျသွားတယ်ဆိုတာတော့ မေးချိန်လည်း မရပါဘူးခင်ဗျာ။ သူပြောတဲ့အတိုင်းသာ မှတ်ထားတာ။ အဲတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူကြပေါ့။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေထဲက အယူခံဝင်ဖို့ကိစ္စ၊ ရှေ့နေနဲ့ တွေ့ခွင့်လည်းရပြီ၊ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ခွင့်လည်းရနေပြီဆိုတော့ အဓိက ဘာတွေကျန်ပါသေးလဲ ဆရာ။
ဖြေ။ ။ ဘာကျန်လဲဆိုတော့ သူ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ အခုအရေးယူတဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ (စ) မှာ ဘာဆိုလဲဆိုတော့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ မူလအခွင့်အရေးများမှအပတဲ့ ကျန်တဲ့မူလ အခွင့်အရေးအားလုံး ခံစား ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ အခုကန့်သတ်တဲ့ မူလအခွင့်အရေးက သံရုံးတွေ၊ နိုင်ငံရေးဟိုဒင်းတွေနဲ့ မတွေ့ရ ဘူး။ နောက် ဒုတိယက ခြံထဲမှာပဲ နေရမယ်ဆိုပြီး ပြောတာကိုး။ ကျန်တာတွေက ကျနော်တို့သိတာက Family က ပို့တဲ့စာတွေဘာတွေ သူ့ဆီမရောက်ဘူးတဲ့။ အဲလိုပြောတယ်။ ဘေးကစာတွေ ဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ Family ဆိုတော့ သား (၂) ယောက်ရှိတယ်။ သား (၂) ယောက်ဆီက စာတွေဘာတွေလည်း သူ့ဆီမရောက် ဘူးတဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁) ရက်နေ့က မဟုတ်ဘူး၊ ဟိုးဘက်တုန်းက ပြောဘူးတာက ဒီ ဆင်ဆာလုပ်တဲ့ဟာကို သူလက်ခံတယ် လုပ်ပါတဲ့။ လုပ်ပြီးရင်တော့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ သူ့ဆီပို့ရမယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ဒါတွေက ကျန်တဲ့မူလအခွင့်အရေးတွေ၊ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မူလအခွင့်အရေးတွေဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ များမှာ ပေါ့ဗျာ၊ ဟိုဟာ ဒီဟာ မူလအခွင့်အရေးတွေဆိုတာလည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒုတိယက မဂ္ဂဇင်း Time မဂ္ဂဇင်း၊ Newsweek မဂ္ဂဇင်း ဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ပိုင်ခွင့်တရပ်အနေနဲ့ ပေးရမယ်။ ဒါပဲ၊ အဲဒါလည်း ကျနော်ပြန်ကြည့်ပြီး ပြီ၊ ကန့်သတ်တဲ့အထဲမပါဘူးဗျ။ မပါဘဲနဲ့ မပေးရင်တော့ သက်သက်မဲ့ ဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလို့ ပြောရ မှာပေါ့နော်။ အဲဒါလေးတွေ အရေးဆိုပေးရဦးမယ်။ နောက် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဆိုလို့ရင်လည်း ပင်စင်သွားမထုတ် ရဘူး။ အပြင်လည်း မထွက်ရဘူး။ အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာ။
မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက် ဆရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီ သွားတဲ့အခါမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တားဆီး မိန့်ထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စ အယူခံလွှာမူကြမ်းကိုရေးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပေးခဲ့တယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရ ပါတယ်။ အဲဒီ အယူခံလွှာမူကြမ်းကို နေပြည်တော်က တားဆီးမိန့် မိတ္တူမရသေးဘဲနဲ့ ရေးလို့ရပါသလားဆိုတာ ရှင်းပြပေးလို့ရနိုင်မလားခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ထိုင်စောင့်ရရင် ကျနော်။ ကျနော်တို့က ပြည့်စုံချင်လို့ တတ်နိုင်သရွေ့ကြိုးစား ပြီးတော့ လုပ်တယ်။ နေပြည်တော်မှာလည်းသွားမယ်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေလူငယ် ကိုလွှတ်မယ်။ လွှတ် ပြီးတော့ ကျနော်တို့ တောင်းထားတဲ့စာရှိတယ်၊ အဲဒါတွေရရင် ပိုပြည့်စုံတာပေါ့။ အခုအယူခံလွှာရေးပြီးပြီ။ ပြီးသွားတော့ ဒေါ်စုဆီမှာထားခဲ့တယ်။ သူက ဒါဖတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ ဗျာ။ နောက်တခေါက် ကျနော်ဝင်တော့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ သူ အတည်ပြုလို့ရှိရင် တင်ရုံပဲ။
မေး။ ။ ဆရာ့ကို ကူညီမယ့် လက်ထောက်ရှေ့နေ (၂) ယောက်မှာ ဦးဥာဏ်ဝင်းအပြင် နောက်ထပ် အမျိုး သမီးရှေ့နေတယောက်ကို ခေါ်မယ်ဆိုတာ အခုရပြီလားခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ အမျိုးသမီးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ ကျနော်အခု အမျိုးသားတယောက်ပဲ တာဝန်ပေးလိုက်ပြီ။ အဲဒီရှေ့နေက ဦးလှမျိုးမြင့်၊ ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေပေါ့။
မေး။ ။ ဒါဆို တားဆီးမိန့် မိတ္တူကတော့မရသေးဘူးပေါ့။ ဘယ်နေ့ကစပြီးအချုပ်ကျတယ်ဆိုတာ သိရပြီ လားဆရာ။
ဖြေ။ ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်ကဟာက ရတယ်ဗျ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကဟာ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် ဒီပဲယင်းပြီးပြီးချင်း နောက်ပိုင်းမရသေးဘူး ။ ရှုပ်နေသေးတယ်။ ဘာနဲ့ ချုပ်ထားမှန်းမသိသေးဘူး။ အဲဒါလိုက်ရဦးမယ်။ ဒါမှလည်း ကျနော်တို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြနိုင်မယ်။
နအဖ၀န်ကြီးနှင့်မတွေ့ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန္ဒဆက်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသူတဦး ရသင့်သည့် မူလရပိုင်ခွင့်များရရှိရန် တောင်းဆိုနေမှု မပြီးပြတ်သေးသဖြင့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်၊ မိသားစုဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့နှင့် မတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
ဦးကြည်ဝင်းက “အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့သဘောထား ပြန်ပြောပါဆိုတော့ သူက တော်တော်လေး မောနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ I am tired တဲ့၊ I needalittle rest တဲ့ဆိုပြီးတော့ အဲလိုပြောတယ်ဗျ။ ပြောပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်ကိုတော့ ကျနော်မှတ်စုလေးရေးထားတယ်။ မှတ်စုမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဖတ်ပြမယ် နော်။ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းနှင့် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောပါတဲ့။ အသိပေးပါတဲ့။ သို့သော် လက်ရှိအခြေအနေဟာ ဆောင်ရွက်စရာတွေ မပြီးပြတ်ဘဲရှိနေပါသည်၊ ထို့ကြောင့် တွေ့ဆုံရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ နား လည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုကြောင်း အဲလိုပြောတယ်ဗျ” ဟု ပြောကြား သည်။
ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့် မတွေ့နိုင်ကြောင်းပြောဆိုသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည်က အထက်ပါအတိုင်း တပေါင်းတည်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြီးခဲ့သည့်သတင်း (၂) ပတ်ကျော်ကတည်းက နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အယူခံ ၀င်ခွင့်၊ ရှေ့နေ၊ ဆရာဝန်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများသွင်းယူခွင့်၊ အ တူနေ ဒေါ်ခင် ခင်ဝင်းတို့ သားအမိအား လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် စသည့် မူလချုပ်နှောင်ခံထားရသည့် ဥပဒေနှင့် မသက် ဆိုင်ဘဲ ကန့်သတ်ခံထားရသည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိရန် အာဏာပိုင် များထံ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှေ့နေဆရာဝန်တို့နှင့် တွေ့ခွင့်ရပြီဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်ပိုင်ရပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အ၀ရရှိရန် အ၀ယ်တော် ကိုမြင့်စိုး၏ ပြင်ပမှအစားအသောက်များ ယူဆောင်ပေးမှုကို လက်မခံခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် မိသား စုဆရာဝန်တို့အား မတွေ့ဆုံတော့ဘဲ ဆက်လက်တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရပိုင် နေ့စဉ်သတင်းစာများ၌မူ အစိုးရက ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဆွေးနွေး နိုင်ရန် စက်တင်ဘာ (၂) ရက်က စီစဉ်ထားပြီး စက်တင်ဘာ (၁) ရက်၌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း သွား ရောက်မည်ဟု သက်ဆိုင်ရာက ဦးကြည်ဝင်းအား မှာကြားလိုက်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးအောင်ကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းမှလွဲပြီး မည်သူ့ကိုမျှ မတွေ့လိုသေးဟု ပြောကြားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ခေတ်ပညာဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်မှ ကျနော့်ကို တွေ့ကြုံရတာပါ။ ရှေးခေတ် ကတော့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းပညာရေးပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးဟာ ဒီနေ့အထိ ရှိနေဆဲပါပဲ။ ဦးနုလက်ထက်တုန်းကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ အစိုးရကျောင်းပညာရေး တွဲဖက်ထားခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ “ဘ-က” ပညာရေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဒါတွေလည်း ဗိုလ်နေဝင်း ဖျက်ဆီးတဲ့အထဲမှာ ပါသွားခဲ့ပါပြီ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးအကြောင်းကို ပညာရေးတက္ကသိုလ် မြန်မာစာသင်နည်းဌာနက ဆရာဦးသန်းထွတ် (နောင်-ပါမောက္ခ) က ပညာရေး မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွက် ကျမ်းပြုထားတာ ရှိပါတယ်။ စာအုပ်အဖြစ်လည်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဖူးလို့ တချို့ဖတ်ဖူးကောင်း ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ ဆာအာသာဖယ်ယာက ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်ထားရင် ကျောင်းအဆောက်အအုံကိစ္စနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ တပိုင်းတစ သက်သာမယ်ဆိုပြီး အကြံပေးဖူးပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးအချို့က ကမ္ဘာကြီးလုံးတဲ့အကြောင်း ပထဝီတွေ၊ လောက ဓာတ်ပညာတွေ သင်မှာကို မလိုလားခဲ့ကြဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ သံဃာတွေက ပညာရေး သင်တန်းတွေကို လူတွေထံမှာ သင်ယူကြရမှာမျိုးကိုလည်း မလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေဟာ ဘာသာရေးကျောင်းများအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
ရှေးက ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂) မျိုးရှိခဲ့ပါသတဲ့။ “ဂါမဝါသီ” မြို့မှီ ဝါကပ်တဲ့ကျောင်းနဲ့ “အရည ဝါသီ” တောမှီ (ရွာဝေးကျောင်း) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ အရညဝါသီ တောမှီကျောင်း ရယ်လို့ မရှိတော့ဘဲ မြို့မှီ ရွာကပ် ကျောင်းတွေပဲရှိပါတော့တယ်။ အဲဒီကျောင်းတွေထဲမှာ ဓားခုတ်၊ လှံထိုး၊ မြင်းစီး၊ စစ်တိုက် စတဲ့ အရပ်သား ပညာတွေကို သင်ပေးတဲ့ “ပွဲကျောင်း” ဆိုတာလည်း ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ ရာဇဝင် ကျမ်း၊ ဆေးကျမ်း၊ ဗေဒင် နက္ခတ်ကျမ်းတို့ကိုလည်း သင်ပေးပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကျောင်းထွက်သွားရင် အသုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကီ လောကုတ္တရာ (၂) မျိုးသင်ပေးပါတယ်။
ရာဇဝင်ဆိုရာမှာ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်ရိုးအရ “မဟာရာဇဝင်” အဓိကပါပဲ။ လူသိများတဲ့ ရာဇဝင် စာအုပ်တအုပ်က တော့ “ရာဇဝင်ကျော်” တဲ့။ မူလအမည်က “မဟာသမ္မတဝံသ”ကျမ်းပါ။ မဟာသမ္မတခန်း၊ သီဟိုဠ် ရာဇဝင်ခန်း နဲ့ မြန်မာရာဇဝင်ခန်း ဆိုပြီး (၃) ခန်းပါရှိပါတယ်။ မဟာသမ္မတခန်းမှာ ကမ္ဘာဦးလူသားတို့က ရွေးကောက်တင် မြှောက်တဲ့ မဟာသမ္မတမင်း အကြောင်း ပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေဟာ “ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ မင်း” ဆိုတာကို အစွဲအလန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ မင်းအကြောင်းရေးရင် မင်းကျင့်တရားတရားတွေ ပါလာတော့တာပါပဲ။ ရာဇဝင်မှာသာမက ဇာတ်တော်ကြီး၊ ငယ်တွေမှာလည်း အနည်းနဲ့အများပါရှိတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့အထိ ကျောင်းသုံးဖြစ်နေတဲ့ ဝေသန္တရာဇာတ်၊ မဟော်သဓာဇာတ် စတဲ့ ဇာတ်တော်တွေမှာ လည်း ပါတာပဲ။ ကိုးခန်းပျို့၊ သံဝရပျို့၊ ဥမ္မာဒန္တီပျို့စတဲ့ ပျို့တွေမှာလည်း ပါတာပါပဲ။ ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ စာလာသင်ကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ မင်းဖြစ်မယ့်လူ၊ အမတ်ဖြစ်မယ့်လူ၊ တရားသူကြီး၊ ရွာလူကြီး စတာတွေဖြစ်မယ့်လူ စသဖြင့် လူအမျိုးမျိုးပါမှာပဲ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းသင်ရိုးတွေမှာ မင်းကျင့်တရား (၁၀)ပါး၊ နာယဂုဏ် (၆) ပါး၊ ဆရာ့ ဝတ်၊ တပည့်ဝတ်၊ မိဘဝတ်၊ သားသမီးဝတ်ဆိုပြီး နီတိတွေမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇောဝါဒ- မင်းကို ဆုံးမတဲ့စာ၊ အမစောဝါဒ- အမတ်ကိုဆုံးမတဲ့စာ၊ ပုတ္တောဝါဒ- သားကို ဆုံးမတဲ့စာ၊ မာတောဝါဒ- အမိကို ဆုံးမတဲ့စာ စသဖြင့် စာပေကျမ်းဂန်၊ ပျို့လင်္ကာဆိုတာတွေလည်း အမျိုးမျိုးပါရှိပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးဟာ ဒီလိုစာတွေနဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို သဟဇာတဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်ခေတ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာရေး သင်ရိုးမှာ ခေတ်က လိုအပ်နေတာတွေကို ထည့်ပေးရတာပါပဲ။
ကျနော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်မှာ အုပ်စိုးသူ (မင်း) ဆိုတာ ရှိနေတာပါပဲ။ ဒီအုပ်စိုးသူ အစိုးရ တွေဟာ ရှေးအစဉ် အလာအရ ရှေးကအုပ်စိုးသူတွေ ဘယ်လိုအုပ်စိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ အကောင်း-အဆိုး အစုံသိရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရေးသမားကြီးတွေက သမိုင်းနဲ့မြန်မာစာမှာ ဒါမျိုး တွေကို ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေ ပြစုခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းမှာ ဦးဖေမောင်တင်၊ ဇော်ဂျီ၊ မင်းသုဝဏ် တို့ကျေးဇူးတွေဟာ အကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒီဆရာကြီး တွေက ပညာရေးကို နားလည်ကြတယ်။ “ဘာသာစကား” သင်နည်း ပညာနဲ့ “စာပေသင်နည်း” ပညာတွေ ကိုလည်း နားလည်ကြတယ်။ ပညာရေးသဘောတရားတွေကိုလည်း သိရှိထားတာဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်သူ တွေ အဖို့ သူတို့ကျေးဇူးတွေဟာ ဆပ်လို့မကုန်ပါဘူး။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးဘကောင်း၊ ဦးဘဂျမ်း (တင်မိုး)၊ ဒေါ်အုန်းခင် (နွယ်-စစ်တွေ)၊ ဦးကံညွှန့် (ညွှန့်အေး-အင်းဝ) နဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ကျောင်းသုံးစာအုပ် ပြုစုရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြရပါပြီ။ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံကြရလို့ အစစ ရှောရှောရှုရှု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းတို့လို စစ်ဗိုလ်တွေ မနှောင့်ယှက်၊ ဝင်မစွက်ဖက်ရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့။
ဗိုလ်နေဝင်းက စာရေးဆရာကြီး ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကြာမှ အဲဒီ့ဆရာရဲ့စာကို သုံးပါ လို့ အမိန့်ထုတ် လိုက်တယ်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ကို ရည်စူးတာ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေခံပညာရေးမှာ မြန်မာစာသင် ကြားရေးဆိုတာ “ခေတ်စား၊ ခေတ်စကား၊ ခေတ်အတွေး၊ ခေတ်အရေးအသား” ကို ပေးရတာပါ။ ခုလို သူကလုပ်တော့ ခေတ်စာတွေ ဘာမှမပါတော့ ဘူးပေါ့။ ခေတ်ကျောင်းသားကို တခေတ်၊ နှစ်ခေတ် နောက်ကျတဲ့ စာတွေလည်း သင်နေရ ပါတယ်။
ခုကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ အထက်တန်း မြန်မာစကားပြေမှာ အင်းဝခေတ်က ရှင်မဟာသီလဝံသရဲ့ ရာဇဝင် ကျော်မှာပါတဲ့ မဟာသမ္မတအခန်းက “အပရိဟာနိယတရား (၇) ပါး” ကို ထည့်ထား ပါတယ်။ “တိုင်းပြည်စည် ကားကြောင်း” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါတယ်။ “မဆုတ်ယုတ်ရာသော တရား (၇) ပါး” လို့ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ မူရင်းမှာတော့ “ပြည်ထဲစီးပွားရာသော အကျင့် (၇) ပါး” လို့ဆိုထားပါတယ်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူတွေ ကျင့်ရမယ့် တရားတွေ ပါပဲ။ မင်းကိုဆုံးမတဲ့စာအုပ်လို့အဆိုရှိတဲ့ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်ရဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်းမှာ လည်း အပရိဟာနိယတရား (၇) ပါးကို အဓိကထားပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက လိစ္ဆဝီမင်းများကို ဟောခဲ့တဲ့တရားပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လမ်းခင်းပေးတဲ့ စာအုပ်မှာ အပရိဟာနိယတရားဟာ ရှေ့ဆုံးကပါလာခဲ့ပါတယ်။
တဦးတည်း (တအာဏာတည်း) မအုပ်ချုပ်သင့်ဘူး။ “သမဂ္ဂ” ခေါ် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီး “သန္နိပါတ” ခေါ် အမြဲစည်း ဝေးတိုင်ပင် အုပ်ချုပ်ရမယ့် အများညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ထားတဲ့ “တရားဥပဒေ” ရှိရမယ်။ “လူကြီးသူမ” (ပညာမဲ့ လူမိုက်မဟုတ်တဲ့) တွေရဲ့စကားကို နာယူကျင့်သုံးရမယ်။ “အမျိုးသမီးများကိုလည်း မတရားအနိုင်ကျင့်ခေါ် ယူတာ” မလုပ်ရဘူး စသဖြင့် ပါရှိပါတယ်။
မဟာအတုလဆရာတော်ရဲ့ “ကုန်းဘောင်နီတိ” ကောက်နုတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းထား ပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်မှူးမတ်တို့ရဲ့ သားသမီးဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟတွေကိုလည်း သူတို့နဲ့ မတန်မရာ တဲ့ ရာထူးဂုဏ်ထူးများ မပေးသင့်တဲ့အကြောင်း အဓိကထားပါတယ်။
အဲဒီ (၂) ပုဒ်ကို (၁၀) တန်းစာမေးပွဲမှာ မေးလေ့မရှိပါဘူး။ ဆရာအများစုကလည်း မေးလေ့ မရှိတာကို အချိန်ကုန်ခံပြီး မသင်ပါဘူး။ ဆရာကသင်မိရင်လည်း ကျောင်းသားက “ဒါတွေစာမေးပွဲပါမှာလား” လို့ ထောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီခေတ်ကျောင်းသားတွေ “မင်း” ဖြစ်လာရင်လည်း ဒီလို မင်းကျင့်တရားတွေ မသိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေပဲ ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ “မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ ကျင့်အပ်တဲ့တရားတွေဆိုတာ ကျောင်းသားတွေကို မသင်အပ်တဲ့တရား၊ ဆရာတွေ မသင်ရဲတဲ့တရား၊ မေးခွန်းထဲမထည့်ရဲတဲ့တရားတွေ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ”အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒါတွေဖတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စာမေးပွဲကြီးမေးခွန်းမှာ ပါလာရင်တော့ ဘေးကအဆင်းတွန်းကြမယ့်လူတွေက စောင့်နေကြမှာ မလွဲပါဘူး။ ဒါဒို့ဗမာကိုး။
အလားတူပဲ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ “လူကြီးနဲ့လူငယ်” ညီညွတ်ရေးတရားနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့“ပြည်သူ့ညီလာခံ” ဆောင်းပါး (မိန့်ခွန်း) တို့ကိုလည်း သင်လေ့မေးလေ့ မရှိပါဘူး။ မေးခွန်းတိုလေးတခုပဲ မေးတာတွေ့လိုက်ဖူးပါတယ်။
ဒီခေတ်ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေထဲမှာ ခေတ်နဲ့အညီ ကျောင်းသားတွေသိသင့် သင်ယူသင့်တာ တွေ ပါခွင့်မရှိ။ ပါလာရင်လည်း မသင်ရဲကြပါဘူး။ ဘာမှလွတ်လပ်ခွင့်မရှိလို့ ပညာရေးလည်း လွတ်လပ်ခွင့်မရှိ။ ပညာရေးမှာ တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်နေကြသူ ညွှန်မှူးညွှန်ချုပ်တွေဟာ ပညာရေးကို မသိနားမလည်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေချည်းပါပဲ။ ပညာရေးဝန်ထမ်း ဆရာ ဆရာမလေးတွေဟာ စစ်ဗိုလ်ပညာရေးအရာရှိတွေ ထမင်းပွဲမှာ ယပ်ခတ်ပေးရသူ၊ လူသတ်ပွဲပြန်စစ်ဗိုလ်တွေကို ပန်းစည်းဆက်ရသူတွေပဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့ ကျောင်းဆရာတွေက စစ်မတိုက်ချင်လို့ ကျောင်းဆရာ ဖြစ်လာတာပါ။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လွန်းလို့၊ အသက်ပေးကာကွယ်လို သူတွေ ဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ဘာကြောင့် ကျောင်းဆရာတွေရဲ့နေရာကို ဇွတ်ဝင်ယူချင်ပါသလဲ။ စစ်ပညာမတတ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်က ပညာရေးဝင်လုပ်ရင်လည်း တိုင်းပြည်ပျက်မှာပါပဲ။ ကိုယ့်နေရာကိုယ်နေပြီး၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြပါစို့။
Special Announcement By GW39 08 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Special Announcement By GW39 08
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံး သပိတ်စခန်းမှာ ဇိမ်ကျကျ အနှိပ်ခံရင်း ဆန္ဒပြ
AP / ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ထိုင်းအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်သူများသာ ယခင်က ၀င်ထွက်ခွင့်ရှိသော ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးသည် ယခုအခါ ဒုက္ခသည် စခန်းနှင့် ယာယီဈေးခင်းတခုအသွင်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၀န်ကြီးချုပ်ရုံးကို သိမ်းပိုက်ထားသော ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည့် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူများက အစားအစာ၊ ရေချိုးရန်နေရာ၊ ဖျော်ဖြေရေးတို့ကို အခမဲ့စီစဉ်ပေးထားသည်။ အနှိပ်အနယ်ခံနိုင်ရေး၊ ခြေလက်သန့်စင်ရေးသာမက အ၀တ်အစား လျှော်ဖွတ်ရေးအထိ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း စီစဉ်ပေးထားသည်။
နေ့စဉ် (၂၄) နာရီ ဆန္ဒပြနေရသဖြင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲလျင် တနာရီ ထိုင်းဘတ် (၁၀၀) ပေး၍ သစ်ရိပ် အောက်၌ အနှိပ်ခံနိုင်ကြသည်။
ထို့အပြင် ဆန္ဒုပြသူများက ၎င်းတို့၏ လက်ကိုင်ဖုန်းဓာတ်ခဲအားဖြည့်ရန်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား စက်များ အတွက်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆွန်ဒီ၏ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ASTV ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုလည်း ၀န်ကြီးရုံးဝင်းအတွင်းမှ (၂၄) နာရီ ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည်။
လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းရှိလာလျှင် ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်များက အသံချဲ့စက်အသုံးပြုပြီး ရွှေ့ပြောင်းယာယီ အိမ်သာနှင့် အကာအရံပါသည့် ပြင်ပရေချိုးခန်းများအတွက် တာဝန်ယူထားသည့် ထောက်ခံသူများထံမှ အလှူငွေများတောင်းခံသည်။ သို့သော် ကျင်ငယ်အနံ့ဆိုးနှင့် အမှိုက်အိတ်များအတွက်မူ အပြည့်အ၀ ဖြေရှင်း နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ထိုင်းနိုင်ငံတ၀န်းရှိ ခွဲစိတ်မှု၊ သွားဖက်၊ စိတ်ပိုင်းနှင့် မေ့ဆေးဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များကလည်း ၎င်းတို့၏ အလုပ် များမှ ခွင့်ယူ၍ ဆန္ဒပြသူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆန္ဒပြသူများအား ပဏာမကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးနေကြကြောင်း မျက်စေ့အထူးကု ဆရာဝန် ဆွန်ဖွန်း ရီပိုးမာနီယာက ပြောသည်။ ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ သွားပွတ်တံနှင့် မွေးရိတ်ဓားများကိုလည်း ၎င်းတို့ထံတွင် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည်။
“ကျနော်တို့က စမတ်နဲ့ အဂတိမှုတွေနဲ့ ခြစားနေတဲ့ တိုင်းနိုင်ငံရေးကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ၊ အစိုးရမှာ စိတ်ကောင်း စေတနာမရှိပါဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်းမရှိဘူး၊ ပြီးတော့ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်ရမှာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဆန္ဒပြနေသူများထဲ၌ နိုင်ငံခြားမှလာရောက်သူများပါဝင်ပြီး ပြဿနာ တစုံတရာတက်လာမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ခြင်း မရှိကြောင်း ပြောသည်။
“ကျမဟာ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းဖို့အတွက် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကနေ ဘန်ကောက်ကို လာခဲ့တာပါ” ဟု ယူနိုက်တက်လေကြောင်းမှ ခွင့်ရက်ရှည်ယူခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြနေသူများနှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းသူ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နှစ် (၄၀) ခန့် နေထိုင်ခဲ့သည့် မာရီး လတ်ဖရောက်ဖွန်းက ပြောသည်။
၎င်းက “တကယ်လို့များ သေခဲ့ရင်လည်း၊ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကျမတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပဲ အတူသေလိုက်မှာပဲ” ဟုပြောသည်။
အားလုံး လွတ်မြောက်ပါစေ’ ဆိုတဲ့ သူ့ဆုတောင်း
ဖြေ။ အေးအေးဆေးဆေး တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။ ဦးဇင်းကလည်း ပြောပြတယ်လေ။ မိသားစုတွေကို အေးအေးဆေးဆေး တွေ့ခွင့်ပေးတယ် ဆိုတော့ သူတို့ (အာဏာပိုင်) ဘက်က အရင် မရဖူးတော့လေ။ သမီးတွေက အရင် ရုံးချိန်း ၂ ချိန်းလောက်မှာ တွေ့ခွင့်မရဘူး။ အန်တီတို့က အခု ၃ ချိန်းမြောက်မှာ ဦးဇင်းနဲ့ တွေ့ခဲ့တာလေ။ စတွေ့တဲ့ နေ့ကျတော့ အနားကို မကပ်ရဘူး။ အဲဒါနဲ့ ပြန်သွားမေးတာပေါ့။ ‘သား ဦးဇင်းကို တွေ့ခွင့်ရမလား။ အန်တီက မိတ္ထီလာကနေ လာတာပါ။ အဲဒီတော့ သားကို တွေ့ချင်ပါတယ်။ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် စကားပြောခွင့်ပေးပါ’ လို့။ သူတို့ စစ်ပြီးရင်၊ တရားသူကြီး ဝင်ပြီးရင် တွေ့ခွင့် ပေးပါမယ်တဲ့။ ဦးဇင်းထားတဲ့ နေရာကိုတော့ မသွားရဘူးပေါ့။ စတွေ့တဲ့နေ့လေ။ နောက်နေ့ကျတော့ တော်တော် လိုက်လိုက်လျောလျောပါပဲ။ အန်တီတို့က ဦးဇင်း မရောက်ခင်ကိုပဲ ကုလားထိုင်တွေနဲ့ ထိုင်ထားခိုင်းတယ်။ မဆိုးပါဘူး။
ဖြေ။ ပြောတာကတော့ အစုံပေါ့။ အန်တီကတော့ သား ကျန်းမာရေးကို စိတ်ပူတာပေါ့။ ဟိုတုန်းကတော့ သားတွေ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် သွားတာတောင်မှ ကြာရင် အန်တီက အမြဲ လိုက်ခေါ်တာလေ။ အန်တီက သားတွေကို တအား ချစ်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ အဲလောက် သားကိုချစ်တဲ့ မိခင်တယောက် အနေနဲ့လေ၊ ဒီအထဲမှာ ကိုယ့်မျက်စိ ကွယ်ပြီးတော့ အခုလို သာမန်မျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့အချိန်မှာ အန်တီက စိတ်ပူတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ‘ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အထဲမှာ မသေဖို့လိုတယ်’ လို့။
အဲဒီနောက် ပြောလိုက်သေးတယ်လေ။ ဒါ ၄ ရက်နေ့က ပြောတာ။ ‘ကိုင်း ... ဦးဇင်း၊ တကာမကြီးကတော့ ဦးဇင်းတို့ အပြန်မှာ တကာမကြီး အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့ (အန်တီက ၅၉ နှစ်လေ။ အသက် ၅၉ နှစ်ဆိုတော့) သေခြင်းတရားဆိုတာ အချိန်မရွေးလာနိုင်တာကိုး။ ဒါပေမဲ့ သေမင်းက လာခေါ်ရင်တောင်မှ တကာမကြီးကတော့ သေမင်းကို ကျမ သေတာကို နေ့ချင်းပြန်လေး လာပါရစေ။ သား ဦးဇင်းတွေ၊ သားတွေ၊ တခြားသားတွေနဲ့ တွေ့ဖို့အတွက် တကာမကြီး စောင့်နေမယ်’ လို့ ပြောလိုက်တယ်လေ။
ဖြေ။ အရှင် ဂမ္ဘီရက အန်တီကို ‘တကာမကြီး ကျန်းမာအောင်နေပါ။ ကျန်တဲ့ လူတွေကို နိုင်ငံရေးဘာညာ မလုပ်နဲ့အုံးပေါ့။ ကျန်တဲ့ မိသားစုတွေ’ တဲ့။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ ကိုမောင်ကျော်ကျော် ရောလေ၊ ဦးဇင်းရော ဆိုတော့ တော်တော်ကို ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ကိုပြောတာပေါ့။ စိတ်ဒုက္ခ၊ စိတ်သောက တော်တော်ရောက်တယ်။ ဒါကို ဝမ်းနည်းလို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးပေါ့လေ။ ခံစားရတာ။
ဖြေ။ အဲဒါကတော့ သူတို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း လုပ်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အန်တီက ဒါကို ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ ဝမ်းမနည်းဘူးဆိုတာ ဦးဇင်းက ဟိုတုန်းက ပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ။ ‘ဒါ သူအများအတွက် လုပ်တာလေ။ အများအတွက် လုပ်တာ။ သူ့အတွက် ဘာမှ မပါဘူး’။ သူ့အတွက်က သပိတ်တလုံးရှိရင် ပြီးတဲ့ ဥစ္စာ၊ အများအတွက် လုပ်တာလေ။
ရည်ရွယ်ချက်က အဲဒီ ပုတီစိပ်ပြီးရင် ကိုယ်စောင့်နတ်တွေ၊ သမာဇီဝ နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေ၊ လယ်တောရှင် တောရှင် အပါအဝင် အားလုံး နတ်မင်း၊ သိကြားမင်း၊ ငရဲမင်းကအစ အားလုံးကို မေတ္တာပို့တယ်။ ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့၊ ‘သား အရှင်ဂမ္ဘီရနဲ့ သား မောင်ကျော်ကျော် အပါအဝင် တခြားလူတွေအားလုံး အခုလို ကျနေတဲ့လူတွေ အားလုံး လွတ်မြောက်ပါစေ’ ပေါ့။ အဲဒါ အန်တီ အထူးလုပ်တာလေ။ ‘လွတ်မြောက်ပါစေ။ ကိုယ်မြေကိုယ့်ရွာကနေ ခွဲခွါနေရတဲ့ လူတွေ အမြန်ဆုံး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာ၊ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ အမြန်ဆုံး ဆုံတွေ့ပါစေ’ လို့။ အဲဒါ တနေ့ကို ၂ ကြိမ် တိတိကျကျ၊ ဘုရားရှေ့မှာ ဆုတောင်းတာ။
နအဖ ဘန်ကောက်သံရုံး နောက်ဆက်တွဲအကြောင်:
အခုလို နအဖ ဘန်ကောက်သံရုံး နိုင်ငံသားဌာနမှ သံအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပွဲစားများအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ သံရုံးတွင် တာဝန်ရှိသော သံအမတ်နှင့်အခြားတာဝန်ခံများအကြောင်းကိုလဲ ကြားသိရသလောက် တင်ပြရပါအုံးမယ်၊ ၄င်းသံရုံးအကြီးအကဲဟာ စစ်တပ်မှ ပြောင်းလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သံတမန်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကို ကောင်းစွာ မသိရှိဘဲနဲ့လဲ နခဌ ကို ၀င်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြားသိရပါတယ်။၄င်းကိုယ်တိုင်ကလဲ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများနည်းတူ လဘ်စားမှုများကို ပြုလုပ်နေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တော်တော် များနဲ့လဲ ဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင် လုပ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်၊
စစ်တပ်က ပြောင်းလာပြီးတော့ သံအမတ်ဘ၀ကို တော်တော်လေးလဲသဘောကျနေတယ်လို့ထင်မြင်ရပါတယ်။ သံရုံးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ပြောပြချက်များအရဇနီးဖြစ်သူက အရင်က အရာရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီးတော့ မာနလဲတော်တော်ကြီးပြီးသူတို့အိမ်ကို အ၀င်အထွက်လုပ်ချင်ရင်တော့ တော်ရုံတန်ရုံ လက်ဆောင်လောက်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ တော်တော်လေး တန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့မှ မျက်နှာအမူအရာ ကောင်းနိုင်ကြောင်း၊သားသမီးများကလဲ နာမည်ကြီးကျောင်းကောင်းမှာ တက်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံကိုလဲရေလိုသုံးနိုင်တဲ့အကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
၄င်းလက်ထက်မှာတော့ သံရုံးအတွက် နာမည်ပျက်စရာများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်လဲထိုသူကိုယ်တိုင် ကတော့ ဟန်မပျက်နေနိုင်နေတာကို တွေ့ကြရပါတယ်၊ သံရုံးစာရေးတစ်ယောက်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က မကျေနပ်ပဲ ထွက်ပြေးသွားသလို လတ်တလောမကြာသေးသောကာလတွင်လဲ သံရုံးမီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ သောက်မြင်ကတ်မကျေနပ်သောကြောင့် ရှို့မီးဟု အများက ယူဆရသော်လဲ၊ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှာသံရုံး၏ ငွေစာရင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း၊ မည်သည့်စာရင်း ဇယားမျှ မကျန်တော့ကြောင်းကို၎င်း၏အိမ်အား ၀င်ထွက်သွားလာနေသည့် သံဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။အပြင်ပန်းတွင် လဘ်ပေးလဘ်ယူမှုကို ၀န်ထမ်းများအား တင်းကျပ်စွာ ပိတ် ပင်ထားရှိသော်လည်း၎င်းကိုယ်တိုင်ကမူ အိမ်တွင် အချိန်ပြည့် စီးပွားရေးသမားများ၏ ကားများက အတားအဆီးမဲ့စွာဝင်ထွက်သွားလာနေသည်ကို စထွန်လမ်းပေါ်ရှိ ၄င်းနေအိမ်ဝတွင် စောင့်ကြည့်နေပါကတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ သူဠေးဟု အမည်တွင်သူများမှာလဲ ၄င်းနှင့် မသိသူမရှိဘဲ သူနှင့်ခင်မင်မှုအတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးထားကြောင်း၊ ထိုသူများအတွက် သံရုံးနှင့်ပတ်သက်သော လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါက ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်နေသော်လည်းအောက်ခြေ၀န်ထမ်းများကို စေခိုင်းပြီး အမြန် လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ လဘ်စားမှုအတိုင်းအတာကိုမူတည်ပြီး အခွင့်အရေးများပေးနေကြောင်းကိုလဲ ၄င်းအိမ်အား ၀င်ထွက်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ချို့ထံမှ ကြားသိရပါတယ်၊
အိမ်တွင်လဲ နှစ်စဉ် မွေးနေ့ပွဲများကျင်းပပြီး၎င်းအတွက် ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေသော စီးပွားရေးမှာလဲ တော်တော်အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း၊အပျော်အပါးကို ခုံမင်သူဖြစ်ပြီး အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာကာ သံရုံး ဘဏ္ဍာငွေများဖြင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကိုလဲ မမောနိုင်မပန်းနိုင် လုပ်တတ်သူဖြစ်ကြောင်း၊ထို့အပြင် ရင်းနှီးမှုကို အခွင့်ကောင်း ယူကာ သူဠေးဆိုသောသူများဆီမှ မကြာခဏအလှူခံတတ်ပြီး၊ ထိုသူများ၏ ကားများကိုလဲ ၄င်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခရီးသွားစရာများတွင်ယူသုံးတတ်လေ့ရှိကြောင်း၊ ပတ်စပို့၊ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသည့်ကိစများတွင်သံရုံးအောက်ခြေ၀န်ထမ်းများက အကျိုးအကြောင်းပြောပြ ငြင်းဆိုသော်လည်း ၄င်းနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသူဖြစ်ပါက ဖုံးတစ်ချက်ဆက် လိုက်ရုံဖြင့် ချက်ချင်းပြီးစေနိုင်ကြောင်းကိုကြားသိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုး အကြီးအကဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ နအဖသံရုံးလို နေရာမျိုးတွင်အကြီးအကျယ်လဘ်စားနေမှုများကို အထက် နအဖမှ လူကြီးများက လစ်လျူရှုကာနေန်ိုင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကတော့ အမှန်တကယ် နစ်နာစရာများရှိနေကြပါသည်။
စစ်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ပြီး ဒေါ်စုက ပြင်ပအစားအစာများကို လက်မခံခြင်းဖြစ်
ကိုထွေး/ကိုစိုး | စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြင်ပ အစားအစာ လက်မခံခြင်းသည် စစ်အစိုးရ၏ ဥပဒေနှင့် မညီသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်၍ မတရားဖမ်းဆီးထားခြင်း၊ စတင်ထိန်းသိမ်းစဉ်က ဆရာဝန်နှင့် တလတကြိမ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခွင့်မည်ဆိုသည့် ကတိ ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား စောင့်ရှောက်နေသော ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသားအမိအား ကန့်သတ်မှုများပြုနေခြင်း စသည်တို့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် နေ့စဉ်ပုံမှန် ပေးပို့နေသော ဈေးခြင်းကို လက်မခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဈေးခြင်းကို လုံးဝလက်မခံသည်မှာ ၃ ပတ် ခန့်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီ က အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အခု ၃ ပတ်တောင်ရှိပြီလက်မခံတာဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိတဲ့ ရိက္ခာကလည်း လျော့လာမှာပဲ၊ အန်အယ်လ်ဒီ ကလည်း ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ခွင့်မရှိတဲ့ အတွက် ဒီအပေါ်မှာ အထူးစိုးရိမ်မိပါတယ် ”ဟု ၎င်း ကပြောဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မရသဖြင့် ပြင်ပမှ ပုံမှန်ပို့ဆောင်နေ သော အစားအစာများကို ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း အတွက် ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရသည်ဟု သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
“အသက်(၆၀)ကျော် ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် အနေနဲ့အစာမစားဘဲ နေတာ အတိုင်းအတာ တခုရှိလာပြီ ဆိုရင် ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သတင်းစာမှာပါတယ် ဆရာဝန်ကိုတွေ့ခွင့်မပေးဘူး၊ ဒါကိုက ရည်ရွယ်ချက် တခုပါနေတယ်”ဟု ဦးအေးသာအောင် က ပြောသည်။
ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် မတရား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကန့်သတ်မိန့်ပါ အချက်နှင့် အကျုံးမ၀င်သည့် ကိစ္စများကို အာဏာပိုင် တို့က အမြန်ဆုံးရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ ဘ၀ လုံခြုံရေး နှင့် အသက်ရှင်သန်နိုင်ရေးတို့အတွက် မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော အာဏာပိုင် တို့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်းလည်း ပါရှိသည်။
ရန်ကုန်မှဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်သူ သခင်ချန်ထွန်းကလည်း “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဟာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တကယ်စစ်မှန်ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာတဲ့ စကားဝိုင်းကို ဦးတည်မှသာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ၊ ဒါကြောင့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ ကျန်းမာရေး ကို ဂရုစိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ယင်း သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ပ အစာအစားလက်မခံခြင်းအား အာဆီယံလွှတ်တော် အမတ်များ အဖွဲ့(AIPMC)က စိုးရိမ်သည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနှင့် အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ်တို့အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အခြေ အနေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် တိုက်တွန်းထားသော စာတစောင်ကို ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။